अन्तराष्ट्रिय खबर – Page 225 – rastriyakhabar.com
चट्याङ पर्दा ३१ घाइते
सोमवार, बैशाख १५, २०७१ मा प्रकाशित
सङ्खुवासभा, १५ वैशाख । खराङवाला गाविसमा गए राति परेको हावाहुरी र चट्याङ पर्दा ३१ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये आठ जना गम्भीर छन् । घाइतेमध्ये धनमाया काफ्लेको भने स्थिति चिन्ताजनका भएको र उहाँको उपचार धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्या विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ । अन्य घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य..
ओली अस्पताल भर्ना : मेनेन्जाइटिसको आशङ्का
काठमाडौँ, १५ वैशाख । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली गए राति उपचारार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । गत महिना भारतको म्याक्स अस्पतालमा एक महिना उपचार गरी स्वदेश फर्कनुभएका नेता ओलीलाई गए राति ज्वरो आउने र बान्ता भएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा बिहान २ बजे भर्ना..
हुम्लामा खाद्यान्न अभाव
हुम्ला, १५ वैशाख । नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालयबाट दुई महिनादेखि स्थानीय वासिन्दाले खाद्यान्न नपाउँदा भोकमरीको समस्या देखिएको छ । हुम्ला जिल्लाको सिमानामा पर्ने चीनको ताक्लाकोटबाट मैदा ल्याइएकाले थुक्पा र रोटी खान बाध्य हुनुपरेको छ । उक्त मैदा गुणस्तरीय नभए पनि २५ केजीको रु चार हजार मूल्य..
गाविस भवन अभावले सेवाग्राही मर्कामा
बेलौरी (कञ्चनपुर), १५ वैशाख । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेल्डाँडी गाविसमा भवनको अभावमा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । द्वन्द्वका समयमा गाविस भवन ध्वस्त हँुदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।“गाविसमा आउँदा कर्मचारी छैनन्”– बेल्डाँडी गाविसका अगुवा दीर्घबहादुर शाहले भन्नुभयो–“सेवा लिन धेरै समय..
दानपेटिकाबाट अर्थ सङ्कलन गरेर कोष स्थापना
इलाम, १५ वैशाख । नेपाल नेत्रहीन सङ्घ इलामले जिल्लाका १० वटा सरकारी कार्यालयमा दानपेटिका राखेर अर्थ सङ्कलन अभियान सुरु गरेको छ । दृष्टिविहीन कल्याणकारी कोषका लागि सङ्घले कार्यालयमा दानपेटिका राखेको हो । विपन्न दृष्टिविहीन परिवारका सदस्यलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले दानपेटिकामार्फत सहयोग..
दमौली, १५ वैशाख । तनहुँको ढोरफिर्दी–२ लामीश्वाँरामा गएराति आफ्नै छोराले काठको मुढाले हानेर आमाको हत्या गरेका छन् । मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका २२ वर्षीय छोरा राजु सुनारले ५६ वर्षीय आमा भीममाया सुनारको हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौतराले जनाएको छ । राति सुतिरहेका बेला राजुले आमाको हत्या..
कारागारभित्र सीप सिकाउँदै बन्दी
आइतवार, बैशाख १४, २०७१ मा प्रकाशित
बागलुङ, १४ वैशाख । कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारी सोचलाई यथार्थमा बदल्नुभएको छ, २२ वर्षीय बन्दी डिक्सन मल्लले । विगतमा गरेको भुलको पश्चतापमा मात्रै आफूलाई सीमित नगरेर उहाँले कारागारलाई उद्यमशील बन्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुभएको छ । चार वर्षअघि कर्तव्य ज्यान मुद्धामा कैदको सजाय..
यौन शोषण गर्ने एक पिपाशु पक्राउ
विराटनगर, १४ वैशाख । चार वर्षदेखि आफ्नी भतिजीलाई यौन शोषण गर्ने एक पिपाशुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । मोरङ उर्लाबारीमा भएको सो घटनामा पीडित महिलाको उजुरीमा पीडकलाई पक्राउ गरिएको हो । पीडक र पीडित दुवैको नाम प्रहरीले गोप्य राखेको छ । घटनाका विषयमा प्रहरीले आवश्यक..
मासु खाँदा बालिकाको मृत्यु
मुगु, १४ वैशाख । सदरमुकाम गमगढी बजारदेखि पूर्वोत्तर भागमा पर्ने पुलु गाविसअन्तर्गत वडा नं ४, ५ र ६ सरोग गाउँमा शनिबार एउटा मरेको झोप्के (याक र गाईको ठिमाहा) को मासु खाँदा चार वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । मासु खाने अन्य २५ जना सिकिस्त बिरामी परेको अस्थायी प्रहरी चौकी पुलुले जनाएको छ । सञ्चारको सुविधा..
गरिबीका कारण आत्महत्या
रत्ननगर (चितवन), १४ वैशाख । पश्चिम चितवनको शिवनगरका एक वृद्धले गरिबीका कारण आत्महत्या गरेका छन् । शिवनगर–५ निवासी ६६ वर्षका सुकबहादुर दर्जीले गरिबीका कारण आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आज जानकारी दिएको छ । उनी बिरामी रहेको र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पीडा थेग्न नसकि..
उपनिर्वाचनका लागि नामावली सङ्कलन कार्य सुरु
चितवन, १४ वैशाख । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले चितवन क्षेत्र नम्बर ४ मा आजदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गर्ने भएको छ । आगामी असार ८ गतेका लागि तय गरिएको उपनिर्वाचनका लागि नयाँ र छुटेका मतदाताहरूलाई ध्यानमा राख्दै कार्यालयले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न लागेको हो..
जाजरकोटमा खाने कुरै छैन ।
जाजरकोट, १४ वैशाख । जाजरकोटका उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको छ । खाद्य संस्थानले चौखा र घाट डिपोबाट सहुलियतको चामल नियमित रूपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था नगर्दा दुर्गम गाविस रग्दा, भगवती, खगेनकोट, रामीडाँडा, रोकायगाउँ र सक्लामा खाद्य समस्या चर्किएको हो । संस्थानले ठेकेदारद्वारा..
संविधान बन्ने आशा पलायो– नेता केसी
त्रिशूली(नुवाकोट), १४ वैशाख । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् अर्जुननरसिंह केसीले संविधनसभाको विभिन्न समितिहरुको सभापति चयनको क्रममा दलहरुबीच देखिएको सहमतिले बेलैमा संविधान बन्ने आशा पलाएको बताउनुभएको छ । नुवाकोटको कविलास–२ मिश्र गाउँमा रहेको कालिका माविको स्वर्णोत्सव..
धन लोभले आफूहरु पराजित भएको माओवादि निष्कर्ष
सोलुखुम्बु, १४ वैशाख । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीले एमाओवादीको स्तर खस्कनुमा आफूहरुमा बढेको धनलोभ मुख्य कारण रहेको बताउनुभएको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) सोलुखुम्बुको प्रथम जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा नेता कार्कीले सर्वहाराको कुरा गर्ने आफ्नो पार्टी शान्ति..
मझेरीपाटनवासीले खानेपानीको हाहाकारबाट राहत पाउने
शुक्रबार, बैशाख १२, २०७१ मा प्रकाशित
। पोखरा उपमहानगरपालिकामा रहेर पनि विकट गाउँका जनताले भन्दा बढी खानेपानीको हाहाकारबाट जीवन विताइरहेका वडा नं. १४ मझेरीपाटनका जनता अब तीन महिनापछि भने केही राहत पाउने आशामा छन् । नेपाल खानेपानी संस्थानले जोडिदिएका खानेपानीका धारामा महिनामा दुई दिन मात्र पानी आउने, अरू दिन कहिले विजयपुर खोला, कहिले..
क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क माकेर्टिङको कारोबार गर्नेलाई कारबाही हुन्छ: राष्ट्र बैंक
नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये ८८ प्रतिशतमा नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’
प्रचण्डको रणनीति देउवाले मान्लान् ?
मंसिरयता कुनैपनि चुनाव नहुने, सत्ता गठबन्धनमा मतभेद
राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था हटाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन (पत्रसहित)
रिसाएका १०० भन्दा बढी सर्पले पहिले घर घेरे त्यसपछि उनको ज्या’न लिए
नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावले ३ दिन वर्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित (सूचनासहित)
आजदेखि उपत्यकाका सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू
शुक्रबार रातिदेखि उपत्यकाका यी क्षेत्र बन्द गर्न प्रशासनको आदेश (आदेशसहित)
स्थानीयभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाको वा तीनै तहको निर्वाचन मंसिरमा गर्नेगरि कांग्रेसमा छलफल
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि घट्यो पीसीआरको शुल्क
अपेन काठमाडौं माहानगरपालिका द्वारा ६०० बालबालिका तथा वृद्ध -वृद्धालाइ न्यानो कपडा वितरण
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समुह-८० को २५ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण: माघको दोस्रो साता दैनिक संक्रमण झन्डै २० हजार पुग्ने
सरकार लकडाउनको विपक्षमा, पीसीआर परीक्षणको मूल्य घटाउने
© 2014-2022, Regd No:262 -2073/74, www.rastriyakhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित